You searched for फोन पे - Page3of 111 - Tech News Nepal Tech News Nepal
के तपाईंको फोन ‘पेगासस’ स्पाइवेयरबाट सुरक्षित छ ? यसरी गर्नुहोस् चेक
काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ‘पेगासस’ स्पाइवेयरबाट कुनै फोन सुरक्षित छ वा छैन भनेर थाहा पाउने टुल सार्वजनिक गरेको छ । सरकारलाई लक्षित गर्दै एनएस‌ओले बनाएको पेगाससको समाचार सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यमलाई
Published On : 23 July, 2021
‘पेगासस’मार्फत नेपाली राजदूत आचार्यको फोन ह्याक, भारतीय खुफियामाथि आशंका
काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसमेत खतरनाक स्पाइवेयर पेगाससको आक्रमणमा परेको पाइएको छ । भारतका राजनीतिज्ञ तथा पत्रकारसँगै नेपाली कूटनीतिज्ञ आचार्य समेत ह्याकिङको सिकार भएका हुन् । सोमबार
आईएमई पेबाट दराजमा सामान किन्दा आईफोन १२ जित्ने अवसर
काठमाडौं । आईएमई पे र ई-कमर्स प्लेटफर्म दराजबीच व्यवसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार दराजका सेवाग्राहीहरुले दराजबाट समान खरिद गर्दा आईएमई पेबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने सो बापत ग्राहकले
एन्ड्रोइड फोनमा धेरै स्पेस छैन ? यसरी गर्नुहोस् खाली
काठमाडौं । यदि तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा धेरै स्टोरेज स्पेस छैन भने पुरानो फाइल र डेटालाई हटाएर स्पेस खाली गर्ने मेहनत तपाईंले लामो समयदेखि गर्दै आइरहनु भएको छ । तर गुगलको
स्मार्टफोन नहुनेलाई प्रभु पेको बारफोन फिचर, यसरी बारफोनबाटै गर्नुहोस् कारोबार
काठमाडौं । नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको विकाससँग सबैभन्दा नजिक रहेर अगाडि बढिरहेको एउटा फिनटेक पनि हो । आज जसरी हामी मोबाइलबाटै कारोबार गरिरहेका छौं, त्यसको श्रेय नेपालको मोबाइल वालेट कम्पनीलाई
Published On : 27 April, 2021
अर्को साता सार्वजनिक हुँदै साओमीका नयाँ उत्पादन, एमआई ११ सिरिजका स्मार्टफोन आउने अपेक्षा
काठमाडौं । चिनियाँ स्मर्टफोन ब्राण्ड सोओमीले आउँदो साता आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही मार्च २९ गते अर्थात चैत १६ गते सोमबार प्रडक्ट सार्वजनिक कार्यक्रम राखेको
अब सेलपेका ग्राहकले समेत फोनपेको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे र सेलपेबीच क्यूआर भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार सेलपेका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेसनबाट क्यूआरमार्फत सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका हुन् । सम्झौतापत्रमा फोन
Published On : 13 December, 2020
यसरी बुझ्नुहोस् फोनको वाटर रेसिस्टेन्ट, रिपेलेन्ट र प्रुफ प्रविधिबीचको भिन्नता
काठमाडौं । स्मार्टफोनको फिचर चेक गरिरहँदा वाटर रेसिस्टेन्ट फिचर देख्ने वित्तिकै जोकोही पनि उत्साहित हुन्छन् । पानीबाट बच्ने वाटरप्रुफ युक्त फोन पाएँ भनेर तपाईं पनि पक्कै मख्ख पर्नुहुन्छ । तर
काठमाडौं । फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडले आफ्ना प्रयोगकर्ता तथा मर्चेन्टहरुलाई लक्षित गर्दै ‘क्यूआरमा उपहार’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । फोनपेका प्रयोगकर्ता र मर्चेन्टहरुलाई क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्ने
काठमाडौं । याहू मोबाइलले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन जेडटीई ब्लेड ए थ्री वाई सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सेल्फ ब्राण्डेड फोनसँगै स्मार्टफोन बजारमा प्रवेश गरेको हो । जेडटीई ब्लेड ए थ्री
Published On : 31 October, 2020
काठमाडौं । बताइएअनुसार सामसङ ग्यालेक्सी ए ७२ पछाडि भागमा पाँच वटा सेन्सरयुक्त कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन हुने बताएको छ । दाबी गरिएअनुसार यो स्मार्टफोन सन् २०२१ को मध्यसम्ममा सार्वजनिक हुनेछ ।
एन्ड्रोइड फोनमा धेरै स्पेस छैन ? यसरी खाली गर्नुहोस्
काठमाडौं । यदि तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा धेरै स्टोरेज स्पेस छैन भने पुरानो फाइल र डेटालाई हटाएर स्पेस खाली गर्ने मेहनत तपाईंले लामो समयदेखि गर्दै आइरहनु भएको छ । तर गूगलको